Safety dia herinaratra skateboard orinasa mametraka fanontaniana tsara indrindra? - Jomo Technology Co., Ltd
Momba ny fanamboarana ny skateboard, mety tsy maintsy mandinika sasany ny lafiny fampandrosoana. Raha tianao ny hevitra iray herinaratra skateboard, Fa tia ny ankehitriny setup, dia mila hojerentsika eon: voalohany Modular powertrain herinaratra. Ao anatin'ny tontolo dava haingana tahaka ny antsika, haingana sy ny vidiny fahombiazana no zava-dehibe singa eo amin'ny lafiny fitaterana. Dia izay. Fa toy ny fiara, sy ny mitovy velocity dia zava-dehibe koa, satria tsy afaka mijanona fotsiny Midway ary hasaina nankeo afovoany ny lalana. Ankoatra izany, raha lavo ka hatrany ambany, horonan-taratasy mandra intsony mba hiala skidding. Izany dia midika hoe Mitarika tsikelikely ho amin'ny handheld lavitra izay mamela anao hanomboka izany, ajanony izany ary manova ny velocity, ary manana fomba roa mba handraisana vaovao na mahay mpanjifa. Mora ny mahita hoe nahoana ireo lafin-javatra faran'izay misy fiantraikany amin'ny aptitude sy ny zava-bitany. Tena tsara ho an'ny mpiara-mitory eny-dalana niainany, na izany aza izany clunky loatra ny mety hiteraka olana ho fampiasana iombonana.
Ka inona no lehibe toy izany vitsivitsy skateboard herinaratra? Azonao atao ihany koa ny avy lavitra hahita fitantanana miaraka amin'ny skateboard nihazakazaka ny herinaratra. Ny Inboard dia kely eo amin'ny lafiny mavesatra fa ho toa namorona lavitra izay tena somary Mafana Nefa mba hihazona, fa indrindra ny ankapobeny. Rehefa avy nandany 200 ora akaikin'ny fikarohana ny tonga lafatra marika sy ny modely eny an-tsena, dia nividy teo an-tampon'ny 10 hita ao amin'ny zana-kazo amin'ny tsena tsara izao fotoana izao ka nizaha ny toetra azy lafiny-by-lafiny mba hahitana izay raha ny marina e-skateboard mitondra izy rehetra! Izahay efa nanao herinaratra maro skateboard evaluations mba hahitana izay zana-kazo no tena tsara indrindra skateboards herinaratra . An herinaratra skateboard mitovy amin'ny iray mahazatra skateboard, rehefa ilaina ny maotera izay mahatonga mampiasa skateboard manontolo fa milay be tsotra vaovao iray mpitaingina azy ary manome ny tena daka any amin'ny iray za-draharaha mpitaingina azy. Sarobidy - Amin'ny maha-fototra fitsipi-ankihibe, miaraka amin'ny herinaratra skateboards azonao izay handoavana.
Tsara. Raha ny marina, herinaratra skateboards dia iray amin'ireo tsara indrindra Alternate safidy ho an'ny Farany Mile fitaterana. Koowheel mahafantatra-Mafy Orina nampahafantatra ny tantaran 'ny kodiarana efatra Electric kambana Skateboard amin'ny maotera, ampiasaina ho an'ny fohy lavitra Nitsangantsangana sy ny sisa. Ao anatin'ny ara-dalàna ny tantaran'ny velocity ny 30km / h, bateria fiainana dia mety ho ny 20 ny 25km. Ianao ho afaka hamaky ny feno herinaratra Dynacraft skateboard Overview eto. Na ianao te haka vaovao tianay na mijery fotsiny mangatsiatsiaka Browsing ny lampivato, ny isan'ny mahafinaritra indrindra eto herinaratra skateboards ho anareo izay hijery tsara. To mamintina - mba ho anareo ny velona izy, azo ianteherana, ary mihoatra noho izay rehetra tena mahazo aina herinaratra skateboard, dia ny koowheel 2 taranaka kooboard dia izay tena mitady! Ny lafiny manan-danja fa ny modely no hividy aza skimp momba ny fifantenana ny mitaingina napetraka mialoha fomba. Ireo fitaovana fitaterana ireo portable ary Powered by iray rechargeable bateria izay mety sady azo ampiasaina ho toy ny tena karazana fitaterana, na azo ampiasaina mba ho any sy ny fitateram-bahoaka. Longboard feno io dia mampiasa ny Lithium-Ion bateria mba hanafaka bebe kokoa ho an'ny longboarding Zip mahafinaritra, nandona hafainganam-pandeha hatramin'ny 26 mph (42kph) ny fampiasana tapaka.
Ireo herinaratra skateboards dia tsotra ny vidin'izany sy mampiasa. Ny ambaratonga voalohany skateboards herinaratra efa am-piandohana natao hiaina eo amin'ny faritra ihany toy ny bisikileta sy ny fiara. Misy be dia be ny toy izany herinaratra avy skateboards hita eny an-tsena amin'izao fotoana izao, fa manahirana fa ny hijery birao mba hiditra na dia eo amin'ny lafiny tery toy izay dian'ny ihany sy mitovy. Electric skateboards manome be fomba fiaina tombony ny mpitaingina bisikileta sy ny mety handrehitra isan'andro commuting ho any an-mahafinaritra traikefa. Indrindra indrindra eo amin'ny teknolojia fampandrosoana nanomana ireo skateboards herinaratra. Enina kilaometatra isan-karazany mety ho ampy ho an'ny tany am-boalohany sy ny mpankafy adopters, na ny isam-batan'olona amin'ny azo lazaina fohy commutes. Aho dodona ny marimaritra iraisana eo amin'ny manana sy ny hafainganam-pandeha mainka miainga ho an'ny olona efa tena azo entina.
Post fotoana: Mar-07-2018